FIFA oo ganaax ku aaddan soo iibsashada ciyaartooy cusub ee suuqa kala iibsiga dul dhigtay Real Madrid iyo Atletico Madrid – Gool FM
(Zurich), 08 Sept 2016 –Xiriirka Kubadda Cagta FIFA ayaa soo diidday racfaan ay soo gudbisteen kooxaha Real Madrid iyo Atletico Madrid ee Waddanka Spain taas oo ku aaddanayd cuna qabatayn laga saaray soo iibsashada ciyaartooy cusub labada suuq ee kala iibsi ee soo socda.
Ganaaxan oo haatan u muuqda mid sii dhaqan galaya ayaa labada kooxood waxaa ugu wacan kaddib markii ay soo buuxin waayeen shuruudihii ay kula soo wareegeen ciyaartooy da’doodu ka hooseysay 18 sanadood.
Real Madrid iyo Atletico Madrid oo ka wada dhisan caasimadda Spain ayaa Koobkii Horyaallada Yurub ee xilli ciyaareedkii tegay sidoo kale lagu ganaaxay inay bixiyaan lacag dhan 360,000 Swiss Francs (Madrid) iyo 900,000 Swiss Francs (Atletico).
Si walboo ay ahaataba labada kooxood ee Spanish-ka kuwooda ugu waaweyn ku jira ayaa haatan waxaa u harsan oo qura hal racfaan oo ay u gudbisan doonaan Maxkamadda Garsoorayaasha (CAS).
Bishii January ayay ahayd markii FIFA ay ganaaxan ku rogtay kooxaha Real Madrid iyo Atletico Madrid iyadoo racfaannadoodii horena sidan oo kale la soo diiday.
Arrintan ayay micneheedu noqonaysaa in labadan naadi aysan awoodi doonin in ay soo gataan ciyaartooy cusub labada suuq kala iibsi ee soo aaddan ee Janaayo 2017 iyo July-Agoosto 2017.
Real Madrid and Atlético Madrid lose appeals against Fifa transfer ban https://t.co/glIFoiSJJ8